पर्सामा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप, १० घाइते
वीरगन्ज, १५ माघ । पर्साको हरपुर गाविस–८ बडेरवामा प्रहरी र स्थानीय जनताबीच भएको झडपमा प्रहरी र स्थानीय गरी १० जना घाइते भएका छन् । दुर्लभ वन्यजन्तु पाटे बाघ, गैँडाको खाग, हड्डीको अवैध कारोबारमा संलग्न...
चितवनमा ‘रंगेहात समातिएका’ मोडल सुरज र साहना फेरि प्रहरी फन्दामा
काठमाडौं । चितवनमा प्रहरीले ‘रंगेहात समातेको’ भनि चर्चामा आएका मोडल तथा कार्यक्रम प्रस्तोता सुरज गिरी र साहना बज्राचार्य फेरि प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। चितवनमा मध्यराति ‘रंगेहात समातिएका’ भनिएका उनीहरु यसपटक भने फरक प्रसंगमा प्रहरी...
पहाड र तराईलाई विभाजन गर्न दिदैनौंः एमाले नेता अधिकारी
नुवाकोट, १४ माघ । एमाओवादी लगायतको मोर्चाको माग अनुसार जातीय सङघीयताले देश द्वन्द्वमा जाने नेकपा (एमाले)का नेता भरतमोहन अधिकारी बताउनुभएको छ । पहाड र तराईलाई छुट्याएर देशमा द्वन्द्व बढ्ने भन्दै जातीय आधारको सङ्घीयतामा जान...
शहिद परिवारमा रुवाबासी: आखिर यसैका लागि ‘जिउँदा शहिद’ बनेका थिए मुकेश ?
– रामसुन्दर आचार्य काभ्रे, १४ माघ । तोकिएकै समयमा संविधान निर्माण नहुँदा आम नेपालीमा निराशा छाएको छ । अझ शहिद परिवारहरुलाई त झन पीडा माथि पीडा थपिदिएको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ मा घाइते भएर जीवन...
होटलमा युवती राखेर मालामाल बन्न खोज्दा…
झापा १४ माघ । होटलमा युवती राखेर रातारात मालामाल हुने सपना देखेका विर्तामोडका होटल सञ्चालक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा फ्रेन्डसीप होटलका सञ्चालकद्वय विपिन कोइराला र उमादेवी कोइराला रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय विर्तामोडले...
नक्कली सर्टिफिकेटबाट प्रहरीको सई बन्दा…
काठमाडौँ, १४ माघ । नक्कली सर्टिफिकेटबाट जागिर खाएको आरोप लागेपछि नेपाल प्रहरीका एक सईको जागिर धरापमा परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतका तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक जयन्द्र सङ्ग्रौलाविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी...
संविधान निर्माण प्रक्रियामा नआए एमाओवादी र मधेशवादी समाप्त हुन्छन्: नेपाल
काठमाडौँ, १४ माघ । नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले संविधान निर्माण प्रक्रियामा नआए बिपक्षी दलहरुको राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हुने बताउनुभएको छ । विपक्षी एमाओवादी र मधेश केन्द्रित दललाई कटाक्ष गर्दै उहाँले प्रक्रियामा नआए उनीहरूको...
विदेशबाट सुन ल्याउँदा फन्दामा परिएला !
काठमाडौँ, १४ माघ । साउदी अरबबाट घर फर्किँदा सुन लिएर आउँदै गरेका एक नेपाली त्रिभुवन बिमानस्थलमै पक्राउ परेका छन् । एयर अरेवियाको उडानद्धारा साउदीबाट काठमाडौँ आएका रुपन्देहीका ३५ वर्षीय मदन खड्का क्षेत्रीलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय...
सहमतिबाटै संविधान जारी हुने सञ्चारमन्त्रीको भनाइ
विराटनगर, १४ माघ । संविधानका लागि अन्तिम प्रयाससम्म पनि सहमतिको प्रयास गरिने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले बताउनुभएको छ । संविधानको अन्तिम धाराको मतदानसम्म पनि एमाओवादी एवम् मधेसी मोर्चा आवद्ध दलहरुसँग सहमतिको प्रयास...
ब्रिकेट बालेर सुत्दा एक पर्यटकको मृत्यु, अर्की घाइते
ललितपुर, १४ माघ । ललितपुरमा ब्रिकेट बालेर सुत्दा एक मलेसियाली महिलाको मृत्युु भएको छ भने अर्की एक घाइते भएकी छन् । गत माघ ११ गते राति सैँबु गाविसमा अमित राजकर्णिकारको घरमा ब्रिकेट बालेर सुत्दा मलेसियाली...
संविधानसभाभित्रको विवाद ‘चियाकपको तूफान’ – अध्यक्ष वैद्य
काठमाडौँ, १४ माघ । नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले संविधानसभाभित्र दलहरूबीच देखिएको विवादलाई ‘चियाको कपभित्रको तूफान’ को संज्ञा दिनुभएको छ । माओवादीले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष वैद्यले एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको आन्दोलनको सार...
« 1 … 6,285 6,286 6,287 6,288 6,289 … 6,855 »
ओली–प्रचण्ड वार्ता सुरु, स्थायी समिति २४ असारसम्म स्थगित